﻿ कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम !
कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम !
काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई ‘जीवनउपयोगी शिक्षा’ विषय अनिवार्य गरेको छ । अर्को शैक्षिकसत्र (२०७७) देखि कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ मा जीवन उपयोगी शिक्षाको पठनपाठन हुने भएको हो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारुप स्वीकृत भएपछि कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणालीको अन्त्य गर्दै ६ विषयको पढाइ हुन लागेको हो । विद्यार्थीले ३ अनिवार्य र ३ ऐच्छिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।
कक्षा ११ मा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन अनिवार्य र कक्षा १२ मा नेपाली, अंग्रेजी सहित जीवनउपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषय रहने केन्द्रले जनाएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपअनुसार केन्द्रले ७० वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । चालुवर्षभित्र पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाएर आउँदो वर्षको शैक्षित्रसत्र देखि कार्यान्वयनमा जान लागिएको हो । यहि वर्ष केहि विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम नमुना परीक्षण गर्ने योजना भएपनि परीक्षामा हुने समस्याले केन्द्रपछि हटेको हो ।
कक्षा ११ र १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रियस्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्छ । केहि विद्यालयमा मात्र नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणका रुपमा लागू गर्दा परीक्षामा प्रश्नपत्र बनाउने लगायत काममा झन्झट हुने भट्टराईले जनाए ।